→ Cogeneration: Torolàlana feno - Ikkaro
firosoana >> teknolojia >> Cogeneration
Nataon'i MATTHEW F HILL
Inona no atao hoe cogeneration
La cogeneration Izy io dia fomba iray ahafahan'ny angovo herinaratra sy hafanana mahazo miaraka. Izany no mahatonga azy io ho safidy mahomby amin'ny famatsian-angovo amin'ny asa toy ny miaramila.
Raha oharina amin'ny mpamorona tsotra angovo mekanika sy hafanana na angovo herinaratra, amin'ny generator cogeneration dia samy tratra ary ny hafanana vokarina dia ampiasaina alohan'ny hamindrana azy amin'ny tontolo iainana. Izy io dia mitovy amin'ny MGU-H an'ny Formula 1, na amin'ny rafitra fanarenana angovo toa ny turbo, sns.
Amin'izany fomba izany, ny angovo herinaratra ateraky ny motera dia afaka manararaotra ho an'ny fampiharana sasany, ary ny hafanana vokarina mandritra ny fizotran'ny taranaka dia hampiasaina amin'ny fitaovana hafa. Amin'ny motera na mpanamboatra may, ny hafanana dia esorina fotsiny nefa tsy ampiasaina.
teo anivon 'ny tombony amin'ny cogeneration Izy ireo dia:
Mitsitsy angovo, na eo aza ny soso-kevitra omen'ny manam-pahaizana sasany. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny fampisehoana mba hanararaotana ihany koa ny hafanana miparitaka hanovana azy ho lasa angovo.
Tahiry ara-toekarena. Ny fahombiazana dia midika ihany koa ny tahiry amin'ny solika, izay amin'ny fotoana maharitra dia manefa ny vidin'ireto rafitra fampitambarana ireto.
Ny vokatra avy amin'ny teboka voalohany dia valiny ihany koa manaja kokoa ny tontolo iainana. Raha manana rafitra mahomby kokoa ianao dia tsy mandany angovo firy ary madio kokoa izy io, ary amin'ny famokarana betsaka kokoa miaraka amin'ny vitsy kokoa dia mitsitsy ihany koa ianao amin'ny solika fandotoana sy gazy mandoto. Ho fanampin'izany, ny solika mahomby sy tsy mandoto kokoa, toy ny entona, no azo ampiasaina.
Fahaleovan-tena lehibe sy fiarovana ny rafitra famatsiana herinaratra. Rehefa mamokatra angovo herinaratra manokana izy ireo dia mety hiankina bebe kokoa amin'ny tambajotra sy ny tariby mandeha amin'ny herinaratra, ary raha sendra tapaka ny herinaratra, tapaka ny delestazy, be loatra ny olana ary olana ara-teknika hafa dia afaka manohy miasa izy ireo.
Avy amin'ny teboka teo aloha dia manaraka an'io ihany koa tsy hiankina loatra amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra ianao, izay mampihena ny fanjifana angovo ireo zavamaniry izay mety ho solika fôsily na misy emisiona CO2 avo lenta. Ary mazava ho azy, amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fampiasana ireo tsipika ireo, dia mitete kely kokoa na miovaova ny volo vokarina ao amin'ilay tsipika.
Amin'ny famokarana amin'ny toerana iray izay handaniam-bola, dia mihena ny enta-mavesatra sy ny lava, ary midika izany vitsy ny fatiantoka noho ny vokatra Joule. Vao mainka mampitombo ny fahombiazany izany.
Na izany aza, teknolojia efa taloha izy io, ary efa ampiasain'ny orinasa maro nanomboka tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-XNUMX mba hamokarana herinaratra ho azy ireo miaraka amina etona kely na turbine hay ary hanan-tena amin'ny fomba azo antoka kokoa noho ny miankina amin'ny tamba-jotra sy tariby mandeha amin'ny herinaratra.tsy marin-toerana loatra tamin'izany. Noho io antony io sy noho ny antony hafa, toy ny rafitra hafa, dia mirona ihany koa izany fatiantoka raha tsy izany dia ho lavorary, ary tsy izany no izy:
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ity teknolojia ity dia ny lafo sy be pitsiny. Midika izany fa fampanjariam-bola bebe kokoa, na dia mitahiry hampihenana izany fandaniana voalohany izany aza ny fitsitsiana angovo mandritra ny fotoana maharitra.
Ny vidin'ny fikolokoloana sy ny fanamboarana dia mety ho avo kokoa ihany koa, noho ilay teboka teo aloha.
Ankoatr'izay, ny famokarana angovo amin'ny ambaratonga kely kokoa, raha oharina amin'ireo zavamaniry lehibe, dia miteraka fandaniana lafo kokoa, zavatra hafa mitovy.
Araka ny hitanao dia manana ny rafitra rehetra tombony sy fatiantoka tokony ho tombana alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra.
Ny zavamaniry cogeneration dia mety milahatra araka ny masontsivana isan-karazany...
Araka ny motera hafanana ampiasaina
Amin'ny ankapobeny, isaky ny manandrana mametraka zavamaniry cogeneration ho sokajy sasany dia atao foana izany. karazana motera hafanana ampiasaina ho loharanon-kery.
Ny motera hafanana ampiasaina amin'ny zavamaniry hafanana matetika dia turbine etona, izany hoe mpamokatra herinaratra mahazatra izay hamindra ny rotor-ny noho ny tsindrona vokariny. tsindry etona azo avy amina loharano iray hafanana (boiler arina, fandrehitra entona na solika, biomassa, reactor nuklear, ...).
Na izany aza, ity karazana turbine ity tsy dia matetika loatra ho an'ny cogeneration. Ity karazana turbinina ity dia azo ampiasaina ihany koa rehefa misy hafanana sisa tavela amin'ny loharanom-pamokarana na motera hafa, manararaotra azy io hiteraka ny fivezivezena ny turbine.
Amin'ity karazana alternatera ity, ny fahefana napetraka Avo izy ireo, misy MW (Megawatts) marobe ary miankina amin'ny herinaratra napetraka ihany koa ny vidin'izy ireo, na dia ambany kokoa aza izany raha oharina amin'ireo motera hafa na hafa mitambatra. Raha ny fahitan'izy ireo azy dia sarotra ny fampitaovana.
Ao anatin'ireo mpamokatra turbine etona, maromaro tsingerina mandritra ny fomba:
Fametrahana turbinin'ny setroka averina miverina. Ny etona novokarina tao anaty vata dia nitarina tamina turbinina hatramin'ny tsindry miasa ataon'ny mpampiasa ary ny setroka avy amin'ny turbine no hafanana mahasoa amin'ny rafitra cogeneration.
Ny fitrandrahana condensing fametrahana turbine etona. Ny etona dia velarina ao amin'ny turbine mankany amin'ny tsindry ambanin'ny atmosfera amin'ny alàlan'ny condenser. Mampitombo ny fitsambikinana entalpy ao amin'ny turbine sy ny heriny izany.
Amin'ity karazana turbine ity, fa tsy mampiasa etona toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia mampiasa lasantsy. Raha ny mahazatra dia entona mandany avy amin'ny turbines izay nisy mari-pana avo kokoa na avy amin'ny motera may. Mba hanaovana fampitahana dia toy ny turbo amin'ny fiara na ny MGU-H ao amin'ny Formula 1, izay manararaotra ireo gazy misy angovo avo lenta hamoahana ilay turbocharger alohan'ny hamoahana azy amin'ny atmosfera. Tsy mitranga amin'ny motera atmosfera izany, izay misy ny fandoroana, dia mivoaka ireo gazy nefa tsy ampiasaina firy ...
Ao amin'ny foibe mitambatra herinaratra mitambatra tsingerin'ny thermodynamic roa dia atambatra amin'ny rafitra famokarana angovo mitovy. Amin'ny lafiny iray, etona rano no ampiasaina ary amin'ny lafiny iray asan'ny vokatra entona fandoroana. Ohatra, ny boiler arina dia azo ampiasaina hanafanana ny rano sy hiteraka setroka amin'ny tsindry ambony izay mitondra ny turbin'ilay mpamokatra herinaratra ary, etsy ankilany, ny gazy avy amin'ny vokatry ny soloboky ny fandoroana hanararaotra izany hiteraka angovo bebe kokoa .
Lasa avo kokoa izany fahombiazana ary fampiasana solika voalohany. Satria amin'ny zavamaniry cogeneration mahazatra dia azo atao ny manararaotra manodidina ny 25 na 35% (vokatra) ny solika may (ny an'ny lasantsy dia tsy mahomby kokoa noho ny an'ny diesel). Ny ambiny dia very amin'ny endrika hafanana noho ny fikororohana ny ampahany sy ny fatiantoka hafa.
Amin'ny alàlan'ny famokarana mpiara-miasa dia mety hiakatra mihoatra ny 50% ary hahatratra mihitsy aza vokatra 85%. Be dia be izany, raha jerena fa ny milina tonga lafatra dia manana fahombiazana 100%, saingy zavatra teôria izay tsy misy amin'ny zava-misy, ny milina rehetra dia manana fatiantoka na kely aza.
Mametraka Ohatra iray azo ampiharina kokoa, raha mijery ny motera lasantsy amin'ny tsingerina F1 Otto sy ny habakabaka ianao, dia nahatratra 30% ny fampiasana azy tamin'ny tranga tsara indrindra. Midika izany fa ny 70% -n'ny angovo amin'ny lasantsy dia very noho ny hafanana miforitra ary ny 30% ihany no ampitaina ho herin'ny hery manetsika ny fiara. Miaraka amin'ny fahatongavan'ilay motera hybrida misy rafitra toa ny MGU-H sy MGU-K, fahombiazana 50% no tratra tamin'ny alàlan'ny motera turbo miampy herinaratra ...
Raha ny solika ampiasaina amin'ny cogeneration dia mahomby kokoa noho ny nentin-drazana, toy ny gazy sasany, na sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, toy ny biomassa (ny fako izay tsy hampiasaina raha tsy izany), ny angovo dia azo ateraky ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana ambany.
Ary ny fahazoana fampisehoana avo kokoa dia midika fa manana rafitra mahomby kokoa ianao, noho izany, mamokatra angovo bebe kokoa miaraka kely kokoa ny fandefasana CO2, zavatra iray izay ilaina amin'ny vanim-potoana maika ny toetrandro.
Maotera fandoroana anatiny hafa
Ary farany, ao anatin'ny karazany arakaraka ny karazana motera dia manana ilay mahazatra ihany koa ianao motera fandoroana anatiny, toy ny an'ny fiara na moto. Nomena anarana izy ireo satria mampiasa lasantsy ranon-javatra atsofoka ao anaty varingarin'izy ireo hiteraka fipoahana na fandoroana anaty izay hiteraka fihetsiketsehana valin'ny piston iray izay hiraikitra amin'ny vatan-trondro mba hanovana ilay hetsika famerenam-bidy hiodina amin'ny axis.
Ireo motera ireo dia mety ho an'ny karazany isan-karazany, toy ny an'ny cycle Otto (lasantsy), na ny an'ny cycle Diesel (diesel). Na inona na inona solika ampiasain'izy ireo, ary na inona na inona karazana zoro dabilio ananany, dia ho soloina hatrany ny hetsika. Mampiavaka azy ireo amin'ny rotary, toy ny jet jet, na motera Wankel.
Araka ny filaharan'ny andian-taranaka sy ny fanjifana
Manatrika ny filaharana sy fanjifana angovo, zareo dia manana:
Rafitra lohateny na topping: ireo tsingerina ireo izay misy motera fandoroana anaty iray izay manome angovo ny rafitra cogeneration hahazoana ny hafanana sy ny herinaratra ampiasain'ny mpampiasa. Izany hoe ny rafitra mahazatra.
Rafitra ekena na farany ambany: hafanana fako na solika ampiasaina hividianana hafanana sy herinaratra ilaina, izany hoe karazana rafitra fanarenana angovo. Amin'izany no ahafahana mamokatra angovo amin'ny alàlan'ny fako izay ho very maina amin'ny motera hafa.
Araka ny fifandraisana alternator
Araka ny fifandraisana alternator afaka manana:
Rafitra mitokana na nosy: ny rafi-pitomboan'ny koogenera dia tsy hifandray amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra ampahibemaso, fa tsy maintsy manana ny mpandrindra azy manokana momba ny herinaratra vokariny sy ny hafatrany hamokarana angovo herinaratra vokarina. Io dia toy ny mpamokatra herinaratra mitoka-monina.
Rafitra mifangaro na mifamatotra: ny rafitra cogeneration dia mifandraika amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra ampahibemaso, noho izany ny mpampiasa dia afaka mahazo ny famatsian-tsakafo avy amin'ny tariby sy amin'ny gropy. Manampy fiarovana roa sosona izany hiantohana ny famatsiana raha toa ka tsy mahomby ny iray amin'ireo rafitra roa.
Ny zavamaniry cogeneration, ankehitriny rehefa afaka nanamarina ny karazana motera sy ny rafitra fikirakirana ianao dia ahitana ireto manaraka ireto singa fototra noho ny fahafinaretana:
Loharanon-kery voalohany: izay no lasantsy voalohany, toy ny solika, gazoala, gazy voajanahary, biomassa, arina, sns.
Moteur na boiler: raha lasantsy fosily dia ilaina ny motera hanatanterahana ny fandoroana. Izy ireo dia mety ho mpisolo toerana. Ary raha mampiasa lasantsy, arintany na biomassa ianao, dia ampangotrahina izay andoroana ny lasantsy ampiasaina.
Turbine na generator (rafitra fampiasana angovo mekanika): ny angovo azo tamin'ny singa teo aloha dia tsy maintsy ampitaina avy amin'ny vatan-kazo mankany amin'ny turbine na amin'ny alàlan'ny entona mandehandeha amin'ny fantsona ary manetsika ireo lelan'ny kodiarana amin'ny generator na turbine. Miaraka amin'ny hetsiky ny mpamorona, ny angovo azo avy amin'ny herinaratra dia azo avy amin'ny alternator na mihodina ny turbine na ny generator.
Rafitra fampiasana hafanana: ny entona mandoro avy amin'ny fivoahana na ny vata dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fifanakalozana hafanana amin'ny alàlan'ny fampitana azy ireo amin'ny coil afaka manafana rano na gazy hafa hahafahana manararaotra izany hery mekanika izany amin'ny tsingerina vaovao hiteraka angovo herinaratra amin'ny ambaratonga faharoa hafa turbine.
Rafitra fampangatsiahana: Ireo mpanova hafanana na rafitra dia mety ho cooler ho an'ny maotera ihany koa. Na izany aza, mety misy rafitra hafa toy ny tilikambo mangatsiaka hampangatsiahana bebe kokoa ny etona na etona alohan'ny hamoahana azy amin'ny atmosfera.
Systems vondrona fanampiny: Mety misy rafitra fanampiny fanampiny ao amin'ny zavamaniry na zavamaniry cogeneration, toy ny rafitra fitsaboana rano, fanaraha-maso ny tsindry ho an'ny setroka, sns. Matetika fehezin'ny rafitry ny solosaina miaraka amina rindrambaiko manokana hanamoriana ilay asa.
Herin'aratra: farany, ny angovo azo avy amin'ny herinaratra vokarina dia mankany amin'ny mpampiasa na ny mpanjifa. Mety tsy maintsy mandalo famatsian-jiro ianao hitsaboana azy na amin'ny alàlan'ny fanovana hanamboarana ny herinaratra. Raha tsy misy ny mpanjifa dia mety misy rafitra fitehirizana, toy ny bateria lehibe.
Izany no fiasan'ny zavamaniry cogeneration hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny nahazoana ny angovo herinaratra, nandalo ireo dingana rehetra ireo.
Cogeneration any Espana
Cogeneration no be mpampiasa ao Vondron Eropeana, ary koa any Espana Nampiroborobo ity karazan-java-maniry famokarana herinaratra avo lenta ity. Natao ny drafitra hampitomboana tsikelikely ireo karazana zavamaniry ireo ka mahatratra 20% amin'ny famokarana herinaratra nasionaly amin'ny taona 2020.
Izy io dia fomba tsara iray hamokarana herinaratra mahomby sy maharitra ao amin'ireo firenena izay mbola manana fiankinan-doha lehibe amin'ny solika fôsily ary tsy manana zavamaniry nokleary na havaozina firy. Ny famokarana angovo toy izao dia tsy vitan'ny tontolo iainana ihany fa ho mora angovo koa hampihena ny vidin'ny famokarana sy ny vidin'ny angovo farany.
Ankoatr'izay, raha eo akaikin'ny ivon-toerana lehibe indostrialy na an-tanàn-dehibe izay misy ny angovo ireo zavamaniry ireo, ialana ny fatiantoka lehibe ny vokatr'i Joule amin'ny tariby herinaratra lava, ary ny AC dia misy vokany kely kokoa noho ny ao DC. Ary raha omena amin'ny halavirana fohy kokoa izy io, dia mihena ihany koa ny fahatapahana mety hitranga na ny fahatapahan-jiro ateraky ny olana eo amin'ny tsipika herinaratra, na tamba-jotra, noho ny toetr'andro sy ny karazany hafa.
Izany rehetra izany mitondra tombony bebe kokoa amin'ny lamba indostrialy Espaniola izay mahatonga azy hifaninana iraisam-pirenena kokoa. Avy amin'ny 353MW an'ny cogeneration novokarina tamin'ny taona 1990 dia lasa tao anatin'ny folo taona (2000) ka hatramin'ny 5000MW ary tamin'ny 2008 nihoatra ny 6000MW, fa ny fisintahan'ny zavamaniry sasany izay nahatratra ny faran'ny androm-piainany na niandry fanavaozana dia nahatratra izany nidina hatramin'ny 4500MW androany ny tarehimarika.
Na izany aza, mbola betsaka ny zavatra tokony hatao, satria efa nisy dingana vita tsy ampy… Ary izany any Eropa dia manodidina ny 125.000MW amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny cogeneration, raha 82.400MW any Etazonia. Ny firenena mitarika ao amin'ny EU dia i Alemana, miaraka amin'ny 37.000MW, arahin'i Italia, Netherlands, Polonina, Failandy ary Espana.
Cogeneration avo lenta
Tadidio fa mahatonga ny cogeneration ny vidin'ny MWh (Megawatt isan'ora) eo anelanelan'ny € 5.5 sy 8 € ambany noho ny fampiasana loharanom-pamokarana hafa. Ary ireo fiovana ireo dia vokatry ny fahombiazan'ny zavamaniry cogeneration. Raha manana fahombiazana lehibe kokoa ianao dia hitombo ny tahiry ary ho ambany ny fandefasana.
Ho an'i Chahatratra fahombiazana avo amin'ny cogeneration, tsingerina mitambatra no ampiasaina fa tsy misaraka, satria efa novakianao tamin'ny fizarana teo aloha. Amin'izany no ahafahana mamoaka fahombiazana bebe kokoa amin'ny lasantsy voalohany ampiasaina.
Fanangonana sy fako
Cogeneration avo lenta ihany koa mampihena ny famoahana sy fako CO2 novokarina tamin'ny toe-javatra mitovy raha oharina amin'ireo zavamaniry hafanana mampiasa solika fôsily. Ankoatr'izay, raha biomassa no ampiasaina fa tsy solika nentim-paharazana, dia manampy amin'ny fanimbana ny fako avy amin'ny indostria hafa (hoditra, akorandriaka na taolana avy amin'ny indostrian'ny sakafo, fako maina maina avy amin'ireo toeram-pitsaboana rano, sns.).
Mikasika ny fako avy amin'ny zavamaniry cogeneration mihintsy dia mazàna mitovy amin'ny zavamaniry mafana hafa izy io, na dia kely aza ny isan'ny MW novokarina. Ireo sisan-javatra ireo dia mamaky lavenona avy amin'ny fandoroana sy ny gazy. Na ny lavenona sasany aza azo ampiasaina indray ho an'ny indostria hafa. Ohatra, ny sasany simenitra ekolojika izy ireo dia afaka mampiasa lavenona amin'ny indostria hafa ho toy ny akora.
La biomassa Izy io dia karazan-tsolika izay ampiasaina matetika amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra. Ilay izy dia angona vokatry ny asan'olombelona na ny fako indostrialy azo ampiasaina amin'ny angovo raha vao nariana tsotra izao tany amin'ny fanariam-pako io. Ireo fako ireo dia azo dorana mivantana hahazoana loharanom-pahafana sy hiteraka angovo na hovana ho solika amin'ny alàlan'ny fomba fanao sasany izay ampiasaina amin'ny fandoroana ny angovo sy ny famokarana angovo manaraka.
Ohatra amin'ny biomassa Izy ireo dia:
Ny sisa tavela amin'ny hazo sy zavamaniry, ravina maina, mololo, sns.
Biomassa sisa tavela na vokatry ny indostria, toy ny rano legioma azo avy amin'ny fahazoana
menaka, voankazo voahitsakitsaka ary peel voankazo maina amin'ny ozinina, sisa tavela amin'ny fandrafetana sy ny tsofa, ny sisa amin'ireo ozinina taratasy, fanaka sns.
Mijanona maharitra vokatry ny fitsaboana rano maloto. Na ny etona fermentation aza avy amin'ny fanamasinana ny fako maloto na fofona biby fiompy dia mety hamokatra entona toy ny metana.
Ny vokatra dia nojinjaina manokana hahazoana biofuel (serealy sy masomboly), toy ny biodiesel, bioethanol, sns.
Afa-tsy amin'ny tranga farany, amin'ireo rehetra teo aloha dia tsy ilaina ny mamokatra solika manokana, mba hanararaotana ireo vokatra azo avy amin'ny vokatra izay mety hiafara, ary mety handoto.
Cogeneration amin'ny gazy voajanahary
Raha tokony hampiasa solika fôsily na biomassa hafa dia azo atao koa ny manao cogeneration gazy voajanahary toy ny solika. Ny Vondrona eropeana dia mikendry ny hampihena ny entona entona (GHG) eo anelanelan'ny 80% sy 95% amin'ny 2050 raha oharina ny taona 1990, ary noho io antony io dia mitrandraka fomba hafa isafidianana izy, anisan'izany ny entona voajanahary.
Dingana voalohany dia ny fampiakarana ny fanavaozana ny 27% ny famokarana ao amin'ny faritry ny EC hampihenana ny fihenan'ny GHG hatramin'ny 40% hatramin'ny 2030. Ary izany dia midika koa fa fanoloana solika hafa ho an'ny gazy voajanahary satria:
Kely ny fandefasana CO2 raha oharina amin'ny solika hafa, noho izany dia mampihena ny fiakaran'ny vokatra entona sy manatsara ny kalitaon'ny rivotra.
Tsy mamoaka sombiny amin'ny fandoroana azy io.
Mampihena ny famoahana gazy karbonika 80%.
Ny tahiry ara-toekarena ihany koa dia ho singa fototra, satria hampihena ny vidiny amin'ny 50% raha oharina amin'ny lasantsy ary 30% raha oharina amin'ny diesel.
Ny fandoroana ny gazy dia tsy mandoto loto noho ny motera fandorana anatiny hafa.
Mba hanomezana hevitra anao, amin'ny alàlan'ny tamba-jotra ao amin'ny Nedgia Cegas no avela hivoaka ny fampiasana gazy voajanahary 1.800.000 taonina ny CO2 latsaka.
Cogeneration tsingerina mitambatra
Ianao dia efa afaka nandalina hoe inona ilay tsingerina mitambatra, izay mahatonga ny cogeneration ho mahomby kokoa ary miteraka fahombiazan'ny solika lehibe kokoa. Araka ny efa noresahiko, io dia mamela ihany koa ny fampihenana ny entona ary hahazoana angovo bebe kokoa amin'ny fomba mora kokoa. Ary misaotra anao tamin'ny fampiasana tsingerina natambatra ho amin'ny fampiasana hafanana tsara kokoa.
Fanapahana rano jet
Sokajy teknolojia Ticket navigation
1 Inona no atao hoe cogeneration
2 Tombony sy fatiantoka
3.1 Araka ny motera hafanana ampiasaina
3.1.2 Turbine entona
3.2 Kitapo mitambatra
3.3 Araka ny filaharan'ny andian-taranaka sy ny fanjifana
3.4 Araka ny fifandraisana alternator
4 Zavamaniry cogeneration
5 Cogeneration any Espana
6 Cogeneration avo lenta
7 Fanangonana sy fako
8 Cogeneration biomassa
9 Cogeneration amin'ny gazy voajanahary
10 Cogeneration tsingerina mitambatra